iSebe Antiquarian II
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGabriel
Sikunika amava okuhlala eSan Isidro. Kwindlu eyimbali engaphezulu kweminyaka eyi-120 kunye neemitha ezingama-2,000 ezingqongwe ngezinto zakudala, iimoto zakudala kunye nezithuthuthu, ubugcisa bexesha langoku. Ifulethi liqaqambe kakhulu, linamagumbi amabini ajonge esitratweni kunye nepatio ephakathi. Inomnyango owahlukileyo. Ihonjiswe ngenxalenye yengqokelela yobuqu yomninimzi ongumnini ingqokelela yobugcisa bale mihla, iimoto zakudala kunye nezithuthuthu kunye nomnye wabathengisi bamandulo abaziwayo.
Ifakwe kwibhloko yokugqibela phambi konxweme lwaseRío de la Plata. Umlambo ubonelela ngendawo efanelekileyo yokuziqhelanisa nazo zonke iintlobo zemidlalo yangaphandle efana ne-windsurfing, i-kite surfing, i-kayaking kunye ne-Peru Beach inodonga olunyukayo.
Ukuba imidlalo ayikuhendi, unokuhamba okanye ulale engceni kwaye ujabulele umbono omhle womlambo, ukutshisa ilanga okanye uhlale ufunda.
I-Tren de la Costa nguloliwe wasezidolophini kunye nabakhenkethi odibanisa iVicente López kunye neTigre. Iindlela zihamba ngaxeshanye nonxweme lweRío de la Plata.
Kwisikhululo saseAcassuso ngeempelaveki kukho umboniso wamandulo
Rivera Norte Ecological Reserve
Kwindawo yeehektare ezingama-50 kukho iintlobo ezingaphezu kwe-320 zezityalo, i-40 yeentlanzi, i-12 yama-amphibians, i-14 yezilwanyana ezirhubuluzayo, ngaphezu kwe-230 yeentaka kunye ne-13 yezilwanyana ezincelisayo.
Kufuphi ungandwendwela igadi yoluntu.
Ngaphaya kokungena kwiCathedral apho uziva ngathi ufuna uxolo, uxabisa ulwakhiwo kunye nokuhonjiswa kwelifa lemveli elinjalo, kubaluleke kakhulu kwaye ukubetha ukuhamba ngesikwere, izitrato zayo ezinamatye, tyelela iQuinta los Ombúes apho uMariquita Sanchez de Thompson wayehlala khona. , ndlu Victoria Ocampo kunye kakhulu ngakumbi. Kukho iimbono ezahlukeneyo zokutyelela ngombono woMlambo. ISan Isidro iqulethe imbali eninzi ukusuka kwixesha lobukoloniyali.
Phakathi kwesitrato saseLasalle kunye nezibuko, kwisitalato iPrimera Junta kunye nesitalato saseTiscornia, esona sipho sikhulu se-gastronomic sigxininiswe, namhlanje esibandakanya iindawo zokutyela ezityikityayo kodwa neepizzeria kunye nokhetho lwesushi kunye nemivalo kunye neendawo zokushicilela. Olu nikezelo lwegastronomic luphawulwa ngokubonisa iindawo zokutyela ezincinci zokutya ezimbalwa kunye noluntu ikakhulu abahlali baseSan Isidro. Isitshixo esisisiseko: indawo igcina ubuhle obuqhelekileyo bezindlu ezinkulu kwindawo.